လာမယ့္ အဂၤါေန႔ ျပန္လည္က်င္းပဖို႔ ရွိတဲ့ ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္ခင္ ၂ ရက္အလိုမွာ အေမရိကန္သမၼတနဲ႔ ဒုသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံထားရတဲ့ Joe Biden နဲ႔ Kamala Harris ေရာ၊ ရာထူးက ထြက္ခြာေတာ့မယ္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေတာင္ပိုင္း ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္ကို သ ြားေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ ေနၾကပါတယ္။
Kamala Harris ကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔က်ရင္ ဒီမုိကရက္ပါတီက ယွဥ္ၿပဳိင္မယ့္ ဘက္ပတစ္ တရားေဟာဆရာ Raphael Warnock နဲ႔ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း ရိုက္ကူးသူ Jon Ossoffတုိ႔အတြက္ အက္တလန္တစ္ကမ္းေျခ Savannah ၿမဳိ႕မွာ လူထုတရားပဲြ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Rev. Raphael Warnock ဟာ လက္ရွိ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Kelly Loeffler နဲ႔ ယွဥ္ၿပဳိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ၊ Jon Ossoff ကေတာ့ လက္ရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ David Perdue နဲ႔ ယွဥ္ၿပဳိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ဳိး ဘုိင္ဒန္ဟာ အဲဒီ ဒီမုိကရက္ အမတ္ေလာင္း ႏွစ္ဦးနဲ႔အတူ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္ရဲ႕ အႀကီးဆုံး Atlanta ၿမဳိ႕မွာ လူထုတရားပဲြ က်င္းပမွာ ျဖစ္သလို ၊ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေတာ့ လက္ရွိ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၂ဦးနဲ႔အတူ Whitfieldေကာင္တီ Dalton ေလဆိပ္မွာ မဲဆြယ္တရားပဲြ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက ဒီၿပဳိင္ဘက္ ၄ ဦးတို႔ၾကား ျပတ္သားတဲ့ မဲရလဒ္ မေပၚထြက္ ခဲ့တဲ့အတြက္ အခု ျပန္လည္က်င္းပရမွာ ျဖစ္ၿပီး ၊ ဒီေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ဟာ ဂ်ဳိးဘိုင္ဒန္ သမၼတသက္တမ္း ပထမ ၂ ႏွစ္အတြင္း အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
အထက်လွှတ်တော် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ Joe Biden နဲ့ Donald Trump တို့ သွားရောက်မဲဆွယ်မည်
လာမယ့် အင်္ဂါနေ့ ပြန်လည်ကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့ ၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ၂ ရက်အလိုမှာ အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ ဒုသမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံထားရတဲ့ Joe Biden နဲ့ Kamala Harris ရော၊ ရာထူးက ထွက်ခွာတော့မယ် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ပိုင်း ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကို သ ွားရောက်ဖို့ စီစဉ် နေကြပါတယ်။
Kamala Harris ကတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင် ဒီမိုကရက်ပါတီက ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဘက်ပတစ် တရားဟောဆရာ Raphael Warnock နဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်း ရိုက်ကူးသူ Jon Ossoffတို့အတွက် အက်တလန်တစ်ကမ်းခြေ Savannah မြို့မှာ လူထုတရားပွဲ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Rev. Raphael Warnock ဟာ လက်ရှိ ရီပတ်ဘလစ်ကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Kelly Loeffler နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ၊ Jon Ossoff ကတော့ လက်ရှိ အထက်လွှတ်တော်အမတ် David Perdue နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိုး ဘိုင်ဒန်ဟာ အဲဒီ ဒီမိုကရက် အမတ်လောင်း နှစ်ဦးနဲ့အတူ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ရဲ့ အကြီးဆုံး Atlanta မြို့မှာ လူထုတရားပွဲ ကျင်းပမှာ ဖြစ်သလို ၊ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က တော့ လက်ရှိ ရီပတ်ဘလစ်ကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ် ၂ဦးနဲ့အတူ Whitfieldကောင်တီ Dalton လေဆိပ်မှာ မဲဆွယ်တရားပွဲ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် နေ့ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဒီပြိုင်ဘက် ၄ ဦးတို့ကြား ပြတ်သားတဲ့ မဲရလဒ် မပေါ်ထွက် ခဲ့တဲ့အတွက် အခု ပြန်လည်ကျင်းပရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဒီရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ဟာ ဂျိုးဘိုင်ဒန် သမ္မတသက်တမ်း ပထမ ၂ နှစ်အတွင်း အထက်လွှတ်တော်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။